Tsy azo angatahina andro: tsy maintsy alevina avy hatrany ireo matin’ny Covid-19 | NewsMada
Tsy azo angatahina andro: tsy maintsy alevina avy hatrany ireo matin’ny Covid-19
Mavesatra ho an’ny fianakaviana, saingy tsy maintsy natao ho fisorohana ny fipariahan’ny valanaretina ny fepetra noraisin’ny eny anivon’ny hopitaly CHU Anosiala. Tsy angatahina andro fa tsy maintsy alevina avy hatrany ny razan’ireo marary matin’ny Covid-19.
Nampahafantatra ny mpitantana ny CHU Anosiala, omaly, ta­min’ny alalan’ny tambajotra sosialy fa alevina avy hatrany tsy angatahina andro ireo matin’ny Covid-19 tao amin’ ity hopitaly ity. Noho izany, tsy misy antony hanasiana “formol” ny razana intsony sa­tria tsy andrasana andro maro.
Iandraiketan’ny hopitaly tanteraka ny famendrahana HTH sy ny fanoloana ny akan­jo irakofan’ny maty ary ny fanidiana azy anaty plastika tsy lena. Hataon’ny hopitaly maimaimpoana avokoa izany ary manaraka ny fepetra rehetra mifandraika amin’ny fikarakarana razana ma­tin’ny valanaretina. Anja­ran’ny fianakavian’ny maty kosa ny miantoka ny vatam-paty sy ny lambamena hamonosana ny razana.
Tokony ho mailo hatrany ny rehetra
Samy tokony ho mailo ary mampandre ny tompon’andraikitra avy hatrany ny eny anivon’ny fiarahamonina raha mahatsikaritra fiandrasa-paty na fitazomana razana maharitra amina tokantrano iray ao anatin’izao vanim-potoan’ny hamehana ara-pahasalamana sy fiparitahan’ny aretina mahafaty izao. Tanjona ny tsy hisian’ny fivorivoriana sy tsy hiparitahan’ny valanaretina.
Maromaro ireo fiara nitondra faty ny herinandro teo…
Nanamarika iny herinandro nivalona iny ny fahitana ra­zana, saika isanandro ary maromaro nentin’ny fiara halevina. Tsy fantatra intsony na lavon’ny coronavirus na aretina hafa ny nahafaty azy ireny. Tahaka izany koa ny fahitana ny filazana manjo, maneho ny fandevenana avy hatrany ny tolakandro raha nodimandry ny maraina ilay olona.